तल्लो अरुण आयोजना भारतीय कम्पनीलाई
१७ माघ, काठमाडौं । सरकारले आकर्षक मानिएको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको लगानी बोर्डको ४६ औं बैठकले ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई नै दिने निर्णय गरेको हो । यो भारत केन्द्र सरकार र भारतको हिमाञ्चल प्रदेश […]
एकैदिन ११ कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का
२६ माघ, काठमाडौं । कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थासहित ११ कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशन पछि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ३ बैंक तथा वित्तीय संस्था, १ बिमा कम्पनी र ७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तर्फ कालिका लघुवित्तसहित नेशनल माइक्रोफाइनान्स र कर्णाली डेभलपमेन्ट […]
काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठग्ने विदेशी गिरोह सक्रिय
२२ माघ, काठमाडौं । रुकुमका दानबहादुर ठकुरीले क्यानडा जान पाइने आशामा दुई हप्ताअघि टोखास्थित ओम गणपति ह्याप्पी लाइफ कम्पनी प्रालिमा ८ हजार रुपैयाँ बुझाए । ‘अफर लेटर आएको जानकारी फोनमा पाउनुहुन्छ’, रसिद दिँदै एक महिलाले हिन्दीमा उनलाई भनेकी थिइन्, ‘त्यसपछि एक लाख दिइहाल्नुपर्छ, पैसा जम्मा गर्दै गर्नुहोला ।’ तर, कम्पनीबाट फोन नआउँदै सोमबार ‘ओम गणपतिमा […]
माघमै २ कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुँदै, कतिसम्म दिने आवेदन ?
२० माघ, काठमाडौं । माघ महिनामा नै दुई कम्पनीको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन हुने भएको छ । एउटा जलविद्युत् कम्पनी र अर्को एक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आईपीओ माघ महिनामा नै निष्कासन हुने भएको हो । आगामी शुक्रबारदेखि नै ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्दैछ भने २८ माघदेखि महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आईपीओ जारी […]
राष्ट्रिय बिमा कम्पनी र विशाल बजारकाे लापरबाही, नेप्सेले राेकिदियाे सेयर काराेबार
तल्लो अरुण आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमलाई दिने निर्णय
काठमाण्डाै – सरकारले तल्लो अरुण आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन)लाई दिने निर्णय गरेको छ । तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत निर्माण तथा विकास गर्न भारतको एसजेभीएन लिमिटेड छनोट भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा हिजो प्रधानमन्त्...
उज्यालो अनलाइन पौष २०७७
श्रममन्त्रीको सेटिङ ! ठगी धन्दावाल म्यानपावरको निलम्वन फुकुवा
१२ माघ, काठमाडौं । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले गत पुस १२ गते पदभार ग्रहण गर्दै भनेका थिए, ‘म्यानपावर कम्पनीलाई पारदर्शी रुपका काम गर्न भनिने छ । मापदण्ड विपरीत भइरहेका ठगी लगायतका काम रोक्न प्रयास हुन्छ ।’ तर, मन्त्री चौधरीले ठगी रोकेर हैन, अवैध काम गर्ने र ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीलाई […]
सेयर बजारमा स्टक डिलरको प्रवेश, अब बजारमा ‘आत्तिने र मात्तिने’ हुँदैन !
१२ माघ, काठमाडौं । केही वर्ष अघिदेखि नै नेपाली सेयर बजारमा स्टक डिलर कम्पनी आवश्यकताबारे चर्चा हुन्थ्यो । भलै ढिलै भए पनि नागरिक स्टक डिलर कम्पनीलाई कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको छ । धितोपत्र व्यापार सम्बन्धी कारोबार गर्न नागरिक स्टक डिलरलाई अनुमति प्रदान गरिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले जानकारी दिए । धितोपत्र […]
बुढानिलकण्ठमा ३५ करोड लगानीमा केसीएल कोलोनी
१० माघ, काठमाडौं । बुढानिलकण्ठमा केसीएल कोलोनी बन्ने भएको छ । काठमाडौं क्यापिटल लिमिटेडको सबसिडरी कम्पनी केसीएल डेभलपर लिमिटेडले करिब ३५ करोडको लगानीमा केसीएल कोलोनी निमार्ण गर्न लागेको हो । तारे होटलको डिजाइनमा पहिचान बनाएको डिजाइन सेलको ‘क्लासिकल टचअप’ डिजाइनमा कोलोनी बन्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । कोलोनीमा १३ वटा घर निर्माण हुनेछन् । कोलोनीभित्र […]
पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन कानून संशोधन हुँदै
८ माघ, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सरकारले प्रतिस्पर्धाबिनै ठेक्का दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य थालेको छ । सरकारले २०७६ असार २५ गते आफ्नै स्वामित्व रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो । नयाँ कम्पनीले सुरुमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउन सक्नेगरी खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको गृहकार्य […]
अक्टोबरपछि पहिलोपटक सार्वजनिक भए ज्याक मा
७ माघ, काठमाडौं । चिनियाँ ई–कमर्स कम्पनी अलिबाबाका संस्थापक ज्याक माको एन्ट कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक भएका छन् । सार्वजनिक स्थलमा नदेखिएसँगै ज्याक मा हराएको आशंका गरिएको थियो । साथै केहीले भने सरकारले उनलाई नियन्त्रणमा राखेको हुन सक्ने अनुमान गरेका थिए । चिनियाँ चर्चित उद्यमीको रुपमा रहेका ज्याक माले बुधबार शिक्षकहरुको एक सम्मेलनमा […]
अर्जेन्टिनामा ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प
६ माघ, काठमाडौं । अर्जेन्टिनाको पश्चिमी प्रान्त सान जुआनमा सोमबार राति ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ । भूकम्पसँगै अहिले अर्जेन्टिनामा त्यसको पराकम्पन जाने क्रम जारी छ । पहिलो भूकम्प गएको २० मिनेटपछि ५ म्याग्निच्युडको अर्को पराकम्पन गएको थियो । यो भूकम्पको विषयमा विस्तृत जानकारी आउन बाँकी भए पनि अहिलेसम्म भूकम्पको कारण सुनामीको चेतावनी भने दिइएको छैन […]